सामाजिक सञ्जालमा नेकपा नेता कार्यकर्ता – योगेशले सपनामा मनमोहन देखे, दीपेशले लेखे नयाँ आधारमा एकता र रुपान्तरण !
पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको समयमा नेकपामा नेता कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना धारणा पोखेका छन् । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी दुवै गुटका नेता कार्यकर्ताले पार्टी एकतामै जोड दिएका छन् ।
स्थायी कमिटी सदस्य एवं संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री योगेश भट्टराइले भावुक र अर्थपूर्ण ट्वीट गरेका छन् । ‘किन किन नेल्सन मन्डेला, मनमोहन अधिकारी र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सपनामा भेट्न पुगिएछ !’
स्मरणीय छ मण्डेला विश्वमै त्यागी र तटस्थ नेताको रुपमा चिनिन्छन् । यस्तै मनमोहन र कृष्णप्रसाद भट्टराई लोभभन्दा माथि रहेका नेताका रुपमा परिचित छन् ।
उपराष्ट्रपति पुत्र दीपेश पुनले शक्ति सन्तुलनका आधारमा पार्टी फुट्ने सम्भावना नरहेको लेखेका छन् । ‘नयाँ आधारमा नयाँ एकता र रुपान्तरणसहित सबै नेताको भावुक सम्बोधनसहित नेकपाको बैठक सकिन्छ,’ पुनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
राष्ट्रिय युवा संघका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले कार्यकर्तालाई एक अर्काविरुद्ध जथाभावी नबोल्न र नलेख्न सुझाव दिएका छन् ।
‘ए कमरेडहरु, कि हामी फुटिसक्यौं भन्नुस्, होइन भने सामाजिक सञ्जालमा आफ्नै नेता र सहयोद्धाको व्याक्तिगत चरित्रहत्या गर्न नलागौं । आज दलाल, भ्रष्ट अनि नानाथरिका आरोप लगाएकालाई भोली नेता, आदारणीय, भन्ने कि नभन्ने ? उसको आखाँमा आखा जुधाएर बोल्न सक्ने कि नसक्ने ?’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
कोभिड–१९ संक्रमण रोक्न जिल्ला र स्थानीय तह सक्रिय, र...
राष्ट्रिय सभाका चारवटै समितिका सभापति निर्विरोध नि...
वामदेव गौतमको स्पष्टीकरण– 'दुवै अध्यक्षले बोलाउँदा ...